Ukwahlulwa Ipropati kwi-Connecticut - wokuqhawula umtshato Russian abaqondisi-mthetho - Zonke Russian abaqondisi-mthetho ingaba apha! Oyena isemthethweni portal.
Ngathi uninzi states, kuquka Midwestern states kwaye zonke states ebekwe ukuya Empuma seaboard, Connecticut ufumana i -"kwebhodi unikezelo"stateNje ithoba states - ikakhulu ebekwe kwi-Umzantsintshona icandelo lizwe - landela ekuhlaleni ipropati umthetho. Alaska yamkele eyodwa zoluntu ipropati inkqubo evumela couples ukuba bangene kwisivumelwano esibhaliweyo designating ezinye okanye zonke impahla yexabiso njengoko uluntu ipropati. Oku inqaku examines indlela Connecticut iinkundla hlula ipropati kwi wokuqhawula umtshato kwaye njani Connecticut ke imithetho kuba ipropati ukwahlula differ ezivela kwezinye states. Kwi-ichaza ukuba balandele"kwebhodi unikezelo"indlela ipropati uphinda-phindo, ipropati ngu kuyanqaphazekaarely yahlula. Kodwa, iinkundla hlula i-ezimbalwa ke marital ipropati ndonwabe, ukuba akusoloko necessarily ngokulinganayo, usebenzisa laundry uluhlu imibandela ukugqiba njani impahla yexabiso kufuneka awarded. Ezinye izinto iinkundla cinga ziquka ubude umtshato, nokuba ngaba divorcing ezimbalwa ingaba abantwana, amaqabane' imivuzo yabo usamkela enokwenzeka emva umtshato sele iphelile, kwaye ukuba omnye lowo utshate naye ukuhlala ekhaya nyusa abantwana. Connecticut ke, inguqulelo kwebhodi unikezelo ikhangeleka elikhulu yaba ezahlukeneyo ezivela kwezinye ichaza ukuba balandele kwebhodi unikezelo umthetho impahla uphinda-phindo. Usapho umthetho iinkundla kwi - '- Siseko State' kuba ngokubanzi igunya kweelwimi marital ipropati ukuba kumacala omabini kwi wokuqhawula umtshato, nokuba njani kubalulekile enesihloko, xa kwakunjalo acquired, okanye nokuba safunyanwa njengoko isipho okanye ilifa. Kwi-Connecticut, yonke ipropati ngu marital ipropati, ngokucacileyo ngu a bukhali umahluko umthetho kwi-wayalela states. Le yenza umahluko Connecticut i -"zonke-ipropati"likarhulumente, oko kuthetha ukuba yonke into le ezimbalwa owns ligama elifanelekileyo umdlalo xa oko iza-hlulo izinto phezulu wokuqhawula umtshato.
Kwiindawo ezininzi kwebhodi unikezelo states, indlela ipropati ngu enesihloko yenza i-indima ebalulekileyo njani nayo iyafumaneka kwi wokuqhawula umtshato.
Ngenxa kwebhodi unikezelo lusekelwe i-unye ukuba ipropati kufuneka umahlule njengoko ndonwabe kangangoko kunokwenzeka, ezinye iinkundla uza kuthatha ingqalelo indlela ethile enye impahla ngu enesihloko. Ukuba umba ubonakala nje omnye womlingane igama, iinkundla kwezinye states ingaba ngakumbi sifuna kweelwimi ngayo kwi-titleholder lowo utshate naye. Isihloko yenza akukho indima ebalulekileyo Connecticut, nangona kunjalo, iinkundla ingaba nje sifuna kweelwimi ipropati ukuba i-non-titleholder mlingane njengokuba mlingane abo owns i-asethi, yayikukwenza kwi-lakhe okanye igama lalo. Connecticut kanjalo wenza akukho umahluko phakathi ipropati i-ezimbalwa owned phambi babetshata kwaye izinto baya bought emva umtshato. Oku ezahlukileyo ukususela umthetho kwi-uninzi states, apho ipropati umnini a mlingane phambi umtshato iqhele mbasa ekhuselekileyo ukusuka kwi ulwahlulo wokuqhawula umtshato. Izipho kwaye amafa bamele kanjalo phezulu kuba grabs, ngokucacileyo ngu a departure ukususela umthetho ezininzi states. Ngokulula ubeke,"ezahlukeneyo ipropati"ngowethu nje omnye lowo utshate naye. Ezininzi states, ezahlukeneyo ipropati ibandakanya izinto ngathi izipho, amafa, impahla yexabiso owned phambi umtshato, kunye nempahla agcina ngokupheleleyo isolated ukususela ezimbalwa ke edibeneyo impahla yexabiso. Kuxutywa ezahlukeneyo kwipropati kunye edibeneyo ipropati kubhekiswa kuwo njenge"commingling"kwaye unako negate okanye kuzinciphisa izinto eyahlukileyo ipropati ibango. Connecticut akusebenzi aqonde ezahlukeneyo ipropati, nangona usapho umthetho iinkundla ngaphakathi urhulumente azame ukuba abuyele amaqela ukuba enye indawo baba phambi kokuba ifumene watshata - ingakumbi marriages a kakhulu ixesha elifutshane. Ezininzi states,"marital ipropati"nantoni na acquired ngexesha umtshato, nokuba na ke enesihloko okanye abo earned kuyo. Njengoko nge eyahlukileyo ipropati, Connecticut kanjalo akusebenzi ekuvumeleni marital ipropati. Kodwa, yonke into a ezimbalwa owns ingaba ipropati ngokulawulwa uphinda-phindo.
Nangona Connecticut umthetho yenza akukho umahluko phakathi ezahlukeneyo ipropati kwaye marital ipropati, domestic ubudlelwane phakathi iinkundla kufuneka ruled ukuba imali belong yayikukwenza omnye lowo utshate naye phantsi iimeko ezithile.
Umzekelo, kwi meko apho ezimbalwa ukuthengwa i-apartment ngezakhono kunye edibeneyo imali kwaye umyeni waqhubeka esenza gama kwi-kwipropati kunye eyakhe imali emva yahlula, inkundla ruled ukuba ixabiso gama emva breakup waba yakhe yedwa. Nangona njani wokuqhawula umtshato ngu portrayed kwi lwethelevijini, i-ezimbalwa iimeko end phezulu prolonged inkundla iimfazwe. I-baninzi uninzi divorces ingaba ube sowuzinzile kunye abanye negotiation kwaye kancinci ka-kuchitha. Xa iqabane lakho liza mhlawumbi ngaphandle ngokwakho ezininzi ixesha imali yi-settling kangangoko unako kwindlela yakho ngabakhe. Ngenxa Connecticut ngumzekelo zonke-ipropati urhulumente, nangona kunjalo, ayo ipropati unikezelo imithetho inokufuna ingcali uncedo. Qhagamshela i-experienced usapho umthetho lamagqwetha kwindawo yakho ukukunceda kunye drafting isivumelwano. Efana nezinye kwebhodi unikezelo states, Connecticut iinkundla jonga inani imibandela xa-hlulo phezulu a ezimbalwa ke ipropati.
Xa umisela indlela hlula impahla yexabiso, inkundla iza cinga.
Maternity Leave neemfanelo kwi-Russia - Russia - Russian Umthetho i-Intanethi